Southampton oo Soo Afjartay Guuldarro la’aantii Arsenal iyo Chelsea oo Dirqi kaga baxsatay Brighton. – Gool FM
CR Shariif December 16, 2018
( Premier League ) 16 Dis 2018. Southampton ayaa soo gabagabeysay rikoodhkii guuldarro la’aanta Arsenal ee horyaalka markii ay kaga adkaadeen 3-2.
Kullanka ayaa qeybta hore lagu kala maray 2-1. Waxaana hogaanka dheesha qabatay kooxda Southampton kaddib markii uu kubbad madax ah u dhaliyay Danny Ings daqiiqadii 20-aad.
Laakiin Arsenal ayaa 8-daqiiqo kaddib la timid goolka bar-baraha waxaana u dhaliyay Henrikh Mkhitaryan.
Balse markii daqiiqad kaliya ay ka hartay nasiinada cayaarta Ings ayaa markale hogaanka kusoo celiyay kooxdiisa isagoo goolkii labaad dhaliyay.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe durbadiida Gunners ayaa ka jawaabtay goolka lagu hor kacayay waxaana goolka bareejada markale u dhaliyay Henrikh Mkhitaryan..
Ugu dambeyn dhammaadka kullanka goolhayaha Arsenal Bernd Leno kasoo qalad weyn ku lahaa goolka guusha ee kooxda Southampton markii kubbad weerar calis ahaa laga dhaliyay Arsenal kasoo u goolka daba mariyay Charlie Austin oo kullanka badal kusoo galay.
Guuldarrada soo gaartay Arsenal ayaa soo afjartay 22-kullan oo aan guuldarro soo gaarin kooxda Emery dhammaad tartamada waana qasaaradii u horreysay ee horyaalka soo gaarta tan kulamadii labaad eek al cayaareedkan maraa oo guuldarro kala kulmen Chelsea.
Dhinaca kale Chelsea ayaa guul dirqi ah kaga baxsatay Brightom & Hove Albion markii ay kaga badiyeen 2-1.
Goolasha ay ku badisay Blues ayaa yimid qeybta hore dheesha waxaana u kala dhaliyay Pedro iyo Hazard halka naadiga guriga ay goolka calanka ka heleen Solly March.